Information ayaa dhab ahaan la wareegay adduunka iyo aaladaha kaydinta ayaa marxalad xarunta of this horumar ah. Qalab ugu caansan kaydinta dibadda ayaa helay in ay kaarka SD loo isticmaalo ka mid ah malaayiin qof oo ku nool dunida dacaladeeda ah. Ma jiro wax muran lahayn in qalabka uu yahay mid qabow si ay u isticmaalaan, laakiin weli waa inaad xusay by haatan kaararka SD in aad waayi kartaa xog muhiim ah in la sameeyo waxaa laga yaabaa inaad u Socda Xadhig dhagan. Si kastaba ha ahaatee software kabashada xogta ayaa yara fudud kuwa naftooda heli madaxooda xoqidda u badiyay files muhiim ah nolosha sameeyey.
Dabiiciga ah ee xogta si aad u soo kaban karto, kala duwanaan karaan dokumentigii, sawirada, files audio, video files, emails, faylasha loo xafidayaa kuwo kale-dhihi tusaale ahaan aad ayaa laga badiyay sawiro aad iyo aad u jeclaan lahaa inuu ka soo kabsado dhabarka in kaarka SD aad. Waxaa jira dhowr ah qalab loogu talagalay daaqadaha ama computer Mac aad tegi karin, laakiin qaar ka mid ah ugu wanaagsan waxaa ka mid ah:
Halkan waxaan ku eegno sida aad u soo kaban karto, files adiga oo isticmaalaya laba qalab yaab leh oo loo yaqaan Wondershare software kabashada Photo iyo Wondershare Data-soo kabashada oo dhan ayaa ka mid ah qalab xal.
1. Isticmaalka Wondershare Photo Recovery Tool
Haddaba isagoo tilmaamaya ah Wondershare sawir kabashada qalab sida la yaab leh dhab ahaantii waa yaraynta ah haddii aad eegto kala duwan ee muuqaalada software this bixisaa in dadka isticmaala. Software waxay leedahay interface weyn user in u shaqeeya hab farsamo saaxir inuu ka soo kabsado sawiradaada. Aragtida ugu soo jiidasho leh ee software-ka waa in aad u baahan tahay saddex tallaabo muhiimad ay u gaarto goolkii badan oo talaabooyin wareer in caan ku Softwares badan halkii. Software ayaa sidoo kale waan ceshan doonaa videos, taas oo lagu daray ah haddii aad u baahan tahay inuu ka soo kabsado videos sidoo. Software ayaa sidoo kale saamaxaya kuwa isticmaala in dib loo bilaabo baaritaano ka kuwii hore, kaas oo uu tashiilo waqtiga. Hadda oo aad ogtahay waxa dukaanka la qalab this. Waa wakhti ay ku arko sida aad u soo kaban karto sawiro aad saddex tallaabo oo fudud.
Talaabada 1: Rakibaadda oo bilaabeyna
Tallaabada ugu horreysa waa in ay soo bixi qalabka by doorashada OS aad socda. Waxaa jira laba hab, si ay u isticmaalaan Mac ama computer Windows ah ee dib u soo kabashada. Marka aad ku rakiban, abuurtaan codsiga oo aad loo xidho si ay u arkaan interface ah in aad siinaysaa tilmaamo in ay raacaan. Xusuusnow Buur kaarka In su'aal la isticmaalayo si toos ah adiga oo isticmaalaya ul xasuusta ama waxaad isticmaali kartaa cable telefoonka iyo USB ah for this (FG card waa in la Jaha oo la arki karo mid ka mid ah drives ah in aad si guul leh u soo kabsado sawiro aad) . Waxaad markaa riixi kartaa bilow dhinaca midig ee suuqa aad u bilowdo nidaamka dib u soo kabashada.
Talaabada 2: Dooro kaarka SD iyo Scan
Haddii kaarka si fiican isu qaadeenna, waa in ay u muuqan in jidka garab drives kale ee your computer.
Dooro kaarka SD ah oo guji Scan baar menu ee suuqa kala software-ka ah. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad yara scan, laakiin waxaa lagu talinayaa in aad ha scan oo dhamaystiran natiijo ka wanaagsan.
Talaabada 3: Ladnaansho iyo Save faylasha
Tallaabada xigta waa inuu ka soo kabsado faylasha. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay ku eegaan sawirada si aad u soo kaban karto, wax kasta oo aad doonaysaan kaliya. Marka aad soo xulay faylasha, guji bogsadaan. Waxaad dooran kartaa meesha loo badbaadiyo files in la soo kabsaday.
Dooro tusaha kala duwan oo ka mid ah taas oo u adeegi ah isha ugu adigoo gujinaya New Folder. Waad wanaagsan tahay inuu tago.
2. Isticmaalka Wondershare Data Recovery Software
Aad software soo socda si fiican u shaqeeya waa Wondershare xogta soo kabashada software. Tani waa qalab dhan mid soo kaban karto, gebi ahaanba nooc kasta oo file aad u. Haddii aad badiyay file a document, file archive, file email, file video, file maqal ah, image files ama file kasta, - tani waa aalad waa in Jack ah oo dhan xirfadaha. Software ayaa waxaa la soo saaray in ay la tacaalaan dadka isticmaala heerka kala duwan ee khibrad farsamo ama si fudud u dhigay, waad u isticmaali kartaa xataa haddii aad ku cusub tahay adduunka kombiyuutarka. Mar kale, waxa la isticmaalayo inuu ka soo kabsado sawiro aad qaadataa 3 tallaabo fudud.
On furitanka, waxaad soo kaban karto, faylasha aad, doorataa Khasaaray Recovery File doorasho.
Talaabada 2: Dooro jidka iyo Sawirka Card SD ah
Marka aad la doorto ikhtiyaarka aad sare la keeneen in doonaan in ay doortaan jidka halka kaarka SD aad
ku taallaa. Ka dib markii xulashada Jidka, guji Scan haddii aad socda Mac ama bilaabi haddii aad socda PC daaqadaha ah, Hubi inaad iska hubiso ikhtiyaarka loo sahlo Deep Scan.
Talaabada 3: Guudmar Your Photos iyo soo
Tallaabada ugu dambeeya waa in ay ku eegaan sawirada lumay oo la marsiiyey sida aad doorato kuwa aad dib kaarka SD u baahan yihiin. Ka dib haddaad saas samayso waxaad u baahan doontaa inaad guji bogsadaan.
Labadan qalab lagu imtixaami oo waaaweyn ee soo kabashada sawir aad mar kasta oo aad sawiro dabacsan ka card SD ah gaar ahaan haddii aad tahay sawirqaade, ama idinku badiyay sawiro muhiim ah. Waa muhiim in la muujiyo qaar ka mid ah kaararka SD ugu badan ee loo isticmaali karo in uu kaydiyo xogta. Waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah kaararka SD laakiin afar ka mid ah waa wax caadi ah in suuqa.
Oo dhan waxay u yimaadaan inay ku sooca ah xasuusta kala duwan oo ku xiran doorbidida user. Waxay si fiican u sareeyaa inta kale ee akhriska iyo qoraalka xawaaraha labada xaaladood ee isku xig xiga oo random. Waxaa sidoo kale loo yaqaan in ay quruxsan waara loo eego kuwa kale oo badan oo suuqa.
Waa wakhti ay ku boodaan baabuur ah oo wuxuu ku raaxaysan kaydiyo sawirada aad kaararka SD oo aan wax cabsi ah u furaysaan waxa aad u muhiim ah uga muuqda. Ka dib oo dhan, waxaa jira qalab software kabashada xogta aad u wanaagsan oo aad u awoodo.
> Resource > Ladnaansho > 2 siyaabo inuu ka soo kabsado card SD ee pc / Mac si fudud oo dhaqso